Home Wararka Maanta AMISOM oo baartay Hoolka lagu dooranayo Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Hir-Shabeelle metalaya.
AMISOM oo baartay Hoolka lagu dooranayo Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Hir-Shabeelle metalaya.
Ciidamada Militariga ah ee AMISOM ayaa baaris ku sameeyay Hoolka DG Hir-Shabeelle ugu talagashay in ay ku qabato Doorashada kuraasta Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad ee metalaya Dowlad-Goboleedkaas.
Doorashadaan waxa ay Hir-Shabeelle ka dhigeysaa Dowlad-Goboleedkii ugu dambeeyay ee Doorta Xildhibaannada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11aad, sidoo kale waa mudanayaashii ugu horreeyay doorashadooda uu qabtay Dowlad-Goboleedkaas.
Ciidamada AMISOM ayaa si feejigan u baaray Kuraasta la dhigay goobta Doorashada, agabka gudaha yaalla, qolalka loo dhisay in ay galaan dadka codeynaya iyo dhismaha guud ee hoolka si ay u baaraan haddii la geliyay walxaha qarxa ama amniga liddi ku ah.
Saraakiisha hoggaamineysa Ciidamada Midowga Afrika ee u dhashay Dalka Burundi ayaa sheegay in mas’uuliyadda saaran ay tahay la shaqeynta Booliiska Federaalka, Dowlad-Goboleedyada & ka warqabka goobaha Doorashada.
AMISOM ayaa 25 sarkaal u tababartay ka shaqeynta nabadgalyada Doorashooyinka Soomaaliya, sidoo kale waxaa tababarkaas la qaatay saraakiil Soomaali ah oo la tusiyay sida loo ilaaliyo goobaha Doorashada.
31ka Janaayo 2022, Jowhar waxaa lagu wadaa in lagu doorto kuraastii ugu horreysay Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Dhanka Hir-Shabeelle kasoo gala Baarlamaanka 11aad ee Federaalka Soomaaliya.
Ciidamada AMISOM ayaa saaka howlgalo baaritaano ah ka sameeyay hoolka loo diyaariyay in lagu qabto doorashada xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ee magaalada Jowhar, iyadoo lagu wado in la qabto doorashada kuraasta ugu horeysa ee Baarlamaanka 11-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo bilaabaneysa 31-ka Janaayo 2022 maalinta Isniinta ah.